Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Skåne län / Hörby
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 19 1 2021
Hörby waa degmo yar oo ka dhisan agagaarka magaalin waaweyn iyo dhul qurux badan oo dabiici ah. Meeshaan waxaad ka dareemeysaa ineey tahay meel baadiyo oo kale ah laakin sidaasee tahay waxa aanan kaa fogeyn dadkii, dukaamadii iyo adeegyada kaloo bulshada. Degmada marka laga reebo Hörby waxuu ka koobanyahay xaafado iyo tuulin yaryar.
433 kiilomitir oo laba jibaaran
Lund 37 kiilomitir
Kristianstad 44 kiilomitir
Malmö 54 kiilomitir
Ystad 54 kiilomitir
Hörby waxeey badankeed ka kooban tahay guryo yaryar laakiin waxaa kaloo jira guryo laga gato dabaqyada qeybo ka mid ah iyo guryaha la kireysto.
Labadoo luqadood ee ugu waaweyn degmada waa carabiga iyo iiraaniga. Luqadaha kaloo degmada looga hadlo waa boolish, albeeniyaan, seerbiyaan-kurweeshiyaan.
Hörby waxaa ka jirta nolol jaaliyadeed dhaqdhaqaaqeedu aad u fiican yahay, waxaana degmada ka diiwaan gashan 120 jaaliyadood oo ka shaqeeya dhinacyada isboortiska iyo hiddaha iyo dhaqanka. Waxaa ka jira degmada mashruuc loogu magac daray is dhexgalka dhinaca jaaliyadaha oo u jeedadiisu tahay inuu dadka qaxootiga ah u fududeeyo sideey ugu qeyb gali lahaayeen nashaadyada kala duwan ee nolol jaaliyadeedka.
Meeshaan waxaa yaal wax kastoo noloshaada u baahan tahay. Xaafadaha waxaa ku yaal farmashiiye, bangiyo, maktabad iyo xafiiska bulshada u qaabilsan daryeelka qoyska iyo qofka. Waxaa kaloo heynaa dukaamada gacan-labaadka. Waxaa kaloo ku yaal meel qurux badanoo lagu dabbaasho, meelo lagu jir jimicsado. Tuulooyinka yaryar waxaa laga yabaa ineey wax yaabaha qaarkood eeyan oollin. Waxyaabo badan markaad rabtid inaad soo gadatid ama markaad rabtid inaad la kulantid xafiiska ceymiska iyo xafiiska shaqada iyo xafiisyada kaloo dowladda waad inaad u safartaa xaafadaha dariska ah sida, Höör iyo Eslöv.
Hörby waxaa kuugu diyaara xanaanada caruurta oo isugu jira kowo dowladeed iyo gaar loo leeyahay. Safafka loo galo iskoollada xanaanada carruurta ma dheera.
Degmada Hörby waxaa ku yaal todobo dugsiyada hoosedhexe ah oo eey dowladdu leedahay, hal iskool oo loogu tala galay ardayda miirkooda wax u dhiman yahay iyo hal iskool oo kuwa gaarka loo leeyahay ah. Saddax ka mid ah todobada iskool waxeey ku yaallaan bartamaha degmada afarta kalena waxeey ku yaallaan bannaanka degmada. Iskoolka ardayda dhimirka la' waxuu ku ag yaal iskoolka Georgshillsskolan iyo iskoolka gaarka loo leeyahay ee Ludvigsborg.
Degmada Hörby malahan dugsi sare. Waxaa ku yaal hal dugsi sare oo farsamda gacanta lagu barto lana dhaho: Hörby yrkesgymnasium.
Meesha la dhaho Hörby lärcenter waxaa laguugu diyaariyay waxbarashada dadka waaweyn, sfi (luqadda iswiidhishka oo loogu tala galay dadka qaxootiga ah) iyo IM (borograamka horudhaca).
Hörby waxaa ku yaal rug caafimaad, rugta daryeelka hooyada, rugta daryeelka carruurta iyo rugta ilkaha. Waxaa ku yaal rugag caafimaad oo baraayfat ah.
Degmo kasta oo aad dagtid waxaa xaq u leedahay in turjubaan laguu qabto markaad kulan ku leedahay xafiisyada dowladda.
Xaafadaha ku yaal bartamaha degmada Hörby waxeey geeska jidka weyn ee (E22). Jidkaan owgiis waxaa jira basaska Skåneexpressen oo si fudud ugu safra magaalooyinka Malmö, Lund iyo Kristianstad. Waxaa kaloo jira basas iyo gaadiidyo safar oo kale oo iyagana u safra maaalooyinka iyo degmooyinka kale.
Waxaa degmada ka jira shirkado yaryar iyo shirkado waaweyn labadaba, gaar ahaan dhinacyada soosaarka daawada iyo baabuurta. Degmada Hörby waxeey ka mid tahay kuwaas. Magaalooyinks waaweyn sida Malmö, Lund iyo Kristianstad iyo kuwa kale masaafo dheer uma jiraan degmada waxaana laga helaa jaanisyo shaqoo badan.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Hörby